iPhone 13: kuvhura, mutengo uye zvese zvataurwa | IPhone nhau
iPhone 13: kuvhura, mutengo uye zvese zvataurwa
Tiri mukutambanudza kwekupedzisira pamberi pekuburitswa uye kuvhurwa kweinotevera iPhone 13, uye tinoda kukupfupisa zvese zvatinoziva kusvika parizvino nezve Apple inotevera smartphone mune imwe chinyorwa chatinozo gadziridza neruzivo runowanikwa mumasvondo anotevera.
1 IPhone 13 kuburitswa zuva
2 IPhone 13 uye 13 Pro Max mhando
3 Dhizaini yeiyo nyowani iPhone 13
4 Mavara eiyo nyowani iPhone 13
5 Hunhu hunofungidzirwa hunosimbiswa
5.4 Bhatiri uye kubhadharisa
5.5 Mamwe maficha
6 Iyo iPhone 13 inodhura zvakadii?
IPhone 13 kuburitswa zuva
Mushure mekunonoka kuvhurwa kweiyo iPhone gore rapfuura, nekuda kwe COVID-19 denda, gore rino zvinofungidzirwa kuti kuratidzwa kwayo uye inotevera kuvhura ichaitika pakutanga. Ichokwadi kuti gore rino mamiriro enjodzi ashanduka asi kune matambudziko mazhinji nekuwanikwa kwema microchips, zvisinei kune makuhwa anovimbisa kuti TSMC iri kuisa pamberi pekugadzira chinhu cheApple, uye kana tikawedzera kune izvi kuti kuvharirwa kweHuawei kuri kudzikisa kutengesa kwaro zvakanyanya, zvinogona kunge kuti iyo iPhone haitambura nekushomeka kwezvinhu.
Nezvose izvi, zuva rekuburitswa kweiyo iPhone 13 mune ayo ese mamodheru inogona kufambiswa kusvika kumwedzi waGunyana. Makuhwa anonongedzera Nyamavhuvhu 17 kana 24 semakore angangodaro kuvhura. Kana zuva rekutanga rasimbiswa, kuratidzwa kwacho kwaizoitika neChipiri, Gunyana 7 (Isu tatoziva madiro anoita Apple Chipiri chezviitiko zvavo) nekutangisa kwekuchengetedza Mugovera unotevera, Gunyana 10, uye nekutengesa kwakananga muzvitoro zvepanyama uye pamhepo musi waGunyana 17. Mazuva aya, sekutaura kwedu, anogona kunonoka vhiki kana kutengeswa chaiko kwaive kwaGunyana 24.
IPhone 13 uye 13 Pro Max mhando
Gore rega rega kune gakava rakafanana nezve zita reiyo nyowani iPhone Ndiyo yega Apple chishandiso chinogamuchira nhamba muzita rayo, zvichinyatsoratidza modhi yatiri kutaura nezvayo. iPad Pro, iPad Mhepo, iPad, MacBook, iMac ... Apple haiteedzere nzira imwecheteyo kana ichidoma iro rese rezvigadzirwa zvemabhuku, saka kwemakore mashoma zvave nerunyerekupe kuti iyo iPhone inogona kusiya iyo nhamba ndokunzi chete iPhone. Asi zvinoita sekunge gore rino hazvizove zvakadaro, uye ichaenderera nenhamba muchikamu chekupedzisira chezita rayo.
Mubvunzo unosara ndewokuti Ichadaidzwa kunzi iPhone 12s kana iPhone 13? Iyo iPhone 11 yakateverwa neiyo iPhone 12, kwete iyo 11s, pamwe nekuti haina kurangarira zviitiko zveiro zuva rinotyisa muUnited States, kana nekuda kwekuti iyi modhi nyowani yakaunza shanduko yemagadzirirwo inoiparadzanisa zvakakwana kubva kune yakatangira. Iyi nyowani iPhone 13 inotarisirwa kusaunza hukuru dhizaini shanduko uchienzaniswa neiyo iPhone 12, asi runyerekupe runoratidza kuti haizodaidzwe kuti iPhone 12s asi iPhone 13.
Ndeapi mamodheru achave aripo eiyi nyowani iPhone? Vazhinji vaongorori vanobvumirana nazvo hakuzove nekuchinja kunoenzaniswa nechizvarwa chiripo uye kuti saka yega yega iPhone 12 ichave neanomutevera gore rino:
iPhone 13 mini: ine 5,4-inch screen, mutsivi weiyo iPhone 12 mini.
iPhone 13: ine 6,1-inch screen, anotsiva kune iPhone 12.
iPhone 13 Pro: ine 6,1-inch screen, mutsivi weiyo iPhone 12 Pro.
iPhone 13 Pro Max: ine 6,7-inch screen, anotsiva iyo iPhone 12 Pro Max.
Zvinotaridza sekunge kutengeswa kwakashata kweiyo iPhone 12 mini hakuzokanganisa kuenderera kwayo mukati meiyo iPhone renji yegore rino kana tikateerera runyerekupe rwazvino, kunyangwe kuchine avo vanovimbisa kuti harizovandudzwe gore rino. Zviri pasina kana mubvunzo iyo modhi inonyanya kubatwa nemapini eiyo rese renji. Nezve iyo iPhone SE, hakuzove nekuvandudzwa iyi 2021, uye isu tichafanirwa kumirira kusvika 2022 kuti tione iyo nyowani modhi iyo Apple inotipa isu.
Dhizaini yeiyo nyowani iPhone 13
Apple ichawedzera mashoma shanduko kune yakazara dhizaini yeiyo nyowani iPhones. Vachaenderera mberi nemagirazi kumashure, chimwe chinhu chakakosha kuti waya isina waya ishande, uye mativi akapfava, senge iyo iPhone 12. Kumberi isu tichaenderera mberi nechiratidziri chakabata kumberi kwese, uye iyo "notch" iyo yakaratidza iyo iPhone sezvo iyo iPhone X ichave iripo, kunyangwe iine kudzikisira saizi Kutenda kune nyowani mutauri kuiswa. Mune aya mamodheru matsva gudzanzwi haigari pakati penzvimbo Asi, ichave iri kumucheto wepamusoro kwechidzitiro, ichisiya imwe nzvimbo yekamberi kamera uye zvese zvikamu zveFaceID kuiswa, saka hupamhi hwayo hungaderedzwa.
Izvo zviyero zveiyo nyowani iPhone zvichave zvakafanana nezvayo zvazvino mamodheru, chete ukobvu huchawedzerwa zvishoma, anenge 0,26 mm, chimwe chinhu chatisingazocherechedze patinacho mumaoko edu, asi icho chinogona kutipa imwe dambudziko nezvakafukidzwa zvemhando dzazvino. Chero zvazvingaitika, zviitiko zveiyo iPhone 12 hazvishande kune iyo nyowani iPhone 13, nekuti module yekamera ichave yakakura.
Izvo chaizvo muchikamu chino che iPhone uko iwe uchakwanisa kuona mashoma dhizaini shanduko gore rino, sezvo zvinangwa zvichizokura uye zvichamira zvakanyanya kupfuura mune ino yazvino chizvarwa, saka module, sezvatambotaura kare, ichaita uve mukuru. Dzimwe runyerekupe dzinotaura nezve idzva diagonal kurongeka kwema lensi eiyo iPhone 12 uye 12 mini, inozoramba iine maviri chete. Iko kugona kwekuti 2/3 zvinangwa (zvinoenderana nemodeli) zvinodzivirirwa nekristaro imwe chete yesafiri, pachinzvimbo chekuzviita pachako sezvazviri mumhando dzazvino, zvakurukurwa nezvazvo.
Hatidi kutadza kutaura zvinogona kuitika pamusoro pemheni yekubatanidza yeiyo nyowani iPhone 13, nekuti kunyangwe ichiratidzika kunge isingaite, panga paine runyerekupe rwakati nezve mukana wekuti imwe modhi inoshaya chero mhando yekubatanidza. Iyo MagSafe sisitimu yakaburitswa gore rapfuura yaisazoshanda chete kubhadharisa chishandiso asiwo nekutapurirana data. Sezvatiri kutaura, zvinoita sechinhu chinogona kuuya munguva pfupi asi zvisingaite kwegore rino.
Mavara eiyo nyowani iPhone 13
Iwo mavara eiyo nyowani iPhone anogara achiburitsa yakawanda runyerekupe rwakatenderedza, kunyangwe gare gare iwo asina kusimbiswa mune dzakawanda kesi. Zvirokwazvo runyerekupe rune hwaro, Apple yakaita kuyedza kwakawanda nemarudzi akasiyana siyana munguva yekuvandudza yePhones nyowani, uchisiya ruvara nyowani kana maviri kumagumo, pane zvakanakisa. Parizvino iyo iPhone 12 inowanikwa mune chena, nhema, bhuruu, girini, pepuru uye tsvuku, nepo iyo iPhone 12 Pro iri mu graphite, sirivheri, goridhe uye bhuruu.
Nema iPhone matsva mamodheru isu ticharamba tichive mazhinji eaya akasiyana mavara, kunyange mamwe achizotsiviwa. Saka mune iyo iPhone 13 Pro graphite inozopa nzira kumatte matemaque zvingaratidzika kunge zvakasviba kupfuura iyo yazvino modhi, iyo yakanyanya kuchena. Kune zvakare kutaura kweye bhuru yendarira, yakawanda orenji kupfuura yegoridhe razvino. Uye mune e "non-Pro" mamodheru, pingi yepinki inogona kuverengerwa, asi inoita kunge ine njodzi zvakare.
Hunhu hunofungidzirwa hunosimbiswa
Iwo ma skrini ano chengetedza iwo akafanana resolution seaya aripo, pamwe nehukuru hwakaenzana. Chinotarisirwa ndechekuti, gore rino hongu, iyo 120Hz yekuvandudza mwero inosvika, kunyange yakaganhurirwa kune Pro modhi, ese ari maviri 6.1 uye 6.7 inches. Iwo masikirini achave erudzi rweLPO, izvo zvinoderedza kushandiswa kwesimba ne15 kusvika 20%. Rudzi urwu rwehunyanzvi zvakare runoita kuti zvive nyore kudzikisa huwandu hwezvinhu zviri pasi pechidzitiro, kuitira kuti nzvimbo yakawanda iwanikwe kune zvimwe zvikamu (bhatiri, semuenzaniso).
Mumazuva achangopfuura kune zvakare kutaura nezve itsva skrini inoshanda, "Zvinogara zvichiratidzwa" kana skrini rinogara riripo, sekunge neApple Watch kubva kuChikamu 5. Kuderedzwa kwesimba rekushandisa kweiyo LTPO screens kunogona kutsiva iyo yepamusoro yekushandisa iyo ino ficha ichave nayo, izvo zvinokutendera iwe kuti ugare uchiona ruzivo rwechidzitiro neiyo iPhone yakavharwa.
Iyo iPhone 13 inochengetedza kuzivikanwa kwechiso senzira yekuchengetedza pakutenga, kubhadhara neApple Pay uye kuvhura chishandiso. Mumazuva achangopfuura, runyerekupe rwakabuda runoti izvo Iyo iPhone 13 yaigona kutanga nyowani kumeso kuzivikanwa system kuti yaizoshanda kunyangwe iine mask iri, izvo zvingave chinhu chakakosha kukurudzira iyo iPhone gore rino.
Zvinenge zvakatemwa kunze kwekuti iyo nyowani iPhone ine chigunwe chekucherechedzwa system, kana Kubata ID, kunyangwe hazvo izvo inogona kutove kuyedza iyo system pane mamwe ma iPhone 13 prototypes. Zvinotaridza kunge zvisingaite kuti iyi iPhone nyowani ichasanganisira chiitiko ichi, uye kuti tichafanirwa kumirira kana rinenge gore, kana zvazobatanidzwa.
Ichave chimwe chezvikamu izvo zvinounza imwe nhau, pamwe nekuvandudzwa kwese kwese, kunyangwe zvichikosha mu13 Pro uye Pro Max. Aya mamodheru anosanganisira itsva 6 element ultra wide angle lens, zvichienzaniswa nezvinhu zvishanu zvezvazvino. Izvi zvinokanganisa kuvandudzwa kwehunhu hwemapikicha akawanikwa ne lens iyi, izvo zvinobatsira zvakare kuiswa kwe autofocus, ikozvino isisipo, uye kuzarura kukuru kwe f / 5 (parizvino iri f / 1.8).
ari zvinangwa zvichave zvakakura, nekudaro kuwedzera kwehukuru hwemu module yemakamera. Izvi zvinobvumidza mukova wakakura wechiedza kuti uwane mhando iri nani mumaphikicha ane zvishoma kuvhenekera. Uye zvakare, saizi yeiyo sensor ichave iri hombe, zvakare kutora yakawanda mwenje. Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti Apple inoda gore rino kusimudzira mifananidzo yakatorwa mune yakaderera mwenje mamiriro.
Izvi zviitiko zvazvino hazvisi pachena kwatiri kana zvichizovapo mune ese iPhone mamodheru, kana kana zvichizochengeterwa chete maPro mamodheru. kuvandudzwa mukugadzika kwemufananidzo, kuverengerwa mune sensor, kusiya kunze kwemaziso kugadzikana, kuwana mifananidzo nemavhidhiyo zvirinani. Izvo zvinoita sekunge zvine chokwadi ndezvekuti iyo LiDAR sensor ichave yakasarudzika kune iyo iPhone 13 Pro.
Kuchave nemaviri macamera modes, imwe mifananidzo, kutora zvinyorwa zvemudenga usiku. Izvi zvinogona kutsanangura kuwanda kwakawanda kugadzirisa kwakatarisa pazasi-mwenje uye Ultra-yakafara mapikicha. Imwe nzira nyowani ichave vhidhiyo, ine blur mhedzisiro yakafanana neiyo portrait mode yekutora mifananidzo, iyo iwe yaunogona zvakare kugadzirisa mushure mekugadzirisa kudzika kwemunda.
Iyo nyowani iPhone 13 inogona kuvhura tekinoroji nyowani inonzi "rakapfava bhodhi bhatiri", iyo inokutendera iwe kuti ugadzire mabhatiri ane mashoma maseru, ayo anochengetedza nzvimbo yemukati muiyo iPhone. Nenzira iyi, bhatiri rinokwanisa kuwedzerwa pasina kuwedzera saizi yeiyo iPhone. Iyo iPhone 13 Pro Max ndiyo yaizogamuchira kuwedzera kukuru mubhatiri, ichisvika 4,352mAh, nepo mamwe mamodheru aizoona madiki kuwedzera.
Izvo zvinoita sekunge pasina shanduko mune yekuchaja masystem, ese ari wired uye asina waya. Apple yakaunza iyo MagSafe system neiyo iPhone 12, iyo inosvika kusvika ku15W yemagetsi, nepo netambo iyo yakanyanya mutoro iri 20W. Kunze kwekushamisika, idzi data dzicharamba dzisingachinji muiyo nyowani iPhone 13. Izvo zvakare hazvitarisirwe kuve nechaji yekuchaja, kana zvirinani kwete yekudzosera mutero iyo inovabvumidza kuti ishandiswe seyakajairika Qi yekuchaja base. Isu tatoziva kuti iyo iPhone 12 yakadzoreredza kuchaja asi inogumira kudzosera idzva MagSafe bhatiri iro Apple ichangotanga.
Izvo zvinofungidzirwa kuti iyo nyowani iPhone 13 ichasanganisira iyo A15 Bionic processor, anotsiva iyo A14 Bionic ikozvino inosanganisirwa muiyo iPhone 12. Chizvarwa chitsva ichi chinogona kusanganisira iyo nyowani "system pane chip" (SoC) iyo yaisazongogadzirisa chete mashandiro echigadzirwa, kupfura simba rayo sezvazvinoitika chizvarwa nechizvarwa, asi zvaizowedzerawo kushanda kwayo nekuderedza kushandiswa kwesimba.
Kuchengetedza kucharamba kuchingochinja, kutanga pa64GB y ine huwandu hwe512GB. Pakave nerunyerekupe pamusoro pekuwedzera bhuti size kusvika pa128GB, angave ari mashoko akanaka uye anopfuura kungonzwisisika, asi zvinoita kunge zvisingaite. Iko mukana wekuti iyo iPhone 13 inogona kukwira kuenda ku1TB yekuchengetedza pane Pro mamodheru zvakare inoita kunge yakanaka kure.
Yese iPhone 13 mamodheru ichave ne5G kubatana, uye inoshandisa iyo Qualcomm X60 modem. Kuitwa kwerudzi urwu rwe network kunenge kuchiri kumahombekombe munyika zhinji, kunyangwe zvichitarisirwa kuti 2022 inozopedzisira yoreva kutanga kwekuwedzera kwayo. Nezve kubatanidza kweWiFi, ichaenderana netiweki nyowani dzeWiFi 6E, iyo inowedzera iyo 6GHz bhendi uye inovandudza WiFi 6, ichiri muchikamu chekutanga kwazvo chekumisikidza.
Iyo iPhone 13 inodhura zvakadii?
Hapana shanduko yemutengo inotarisirwa, saka iyo iPhone 13 ingadai ichiri kudhura chaizvo zvakafanana kupfuura chizvarwa chazvino.
iPhone 13 mini kubva ku € 809
iPhone 13 kubva ku € 909
iPhone 13 Pro kubva € 1159
iPhone 13 Pro Max kubva ku1259 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » iPhone 13: kuvhura, mutengo uye zvese zvataurwa
Huya, kana iwe uine iyo iPhone 12, iyo gumi haina kukosha, ingangoita imwecheteyo nhare
Zvakanaka, segore rega rega, hapana chinoshanduka kubva pa11 kusvika pa12 zvakare, vanoisa magineti kumashure
Zvakanaka, kana iwe zvakare uine 11 uye gumi zvakare zvakafanana, Havachagadzirise mune chero chinhu.
Ehe, hazvina kukodzera kutenga iyo iPhone 13. Izvo zvinowedzera bhatiri kune + 4300 mha. Iyo iPhone Fold uye iPhone 14 ichave chimwe chinhu. Uye zvakare, makambani makuru ave kushandisa 4n machipisi, panosvika 2023 tichava ne3 gauge machipisi, izvo zvinonakidza!
Iwo mabhatiri achashandisa graphite ini ndinofunga ivo vanoti? Mabhatiri acho anogara rinenge vhiki.
Jetpack Joyride + ikozvino yave kuwanikwa muApple Arcade ichisimbisa kuti Apple yapera mazano